Kulanka Kalfadhiga 3,aad Ee Golaha Hawlfulinta DDSI Sanadka 2008TI - Cakaara News
Kulanka Kalfadhiga 3,aad Ee Golaha Hawlfulinta DDSI Sanadka 2008TI
Jigjiga(CN) Sabti, 24ka October 2015, Kulanka kalfadhiga 3,aad ee golaha hawlfulinta DDSI sanadka 2008TI ayaa galabta kaqabsoomay hoolka shirarka ee xafiiska madaxwaynaha.
kulankan oo uu furay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa golaha soo hordhigay ajandayaasha shirkan lagaga wada hadlayay oo ahaa: sidii loo sii labanlaabi lahaa dadaalada xukuumadu ugu jirto samata bixinta abaarta gobolka sitti, sidii looga midho-dhalin lahaa qorshayaashii biyo-xidheenada, fulinta dhismaha guryaha gobolka sitti, iyo waliba sidii loogu guuri lahaa madaxtooyada cusub.
Hadaba horjoogaha gudiga abaaraha gobolka mudane Cabdixakiin Cigaal-madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka ayaa si kooban usoo dhigay xaalada abaarta gobolka isagoo sheegay in xukuumadu ay wax badan kaqabatay xaaladan balse maadaama oo lagalayo xili jiilaal ah loo baahan yahay in lasii laban laabo dadaalada.
Kadib wada hadal dheer oo goluhu kayeeshay ajandayaashan ayuu wuxuu codbuuxa ku ansixiyay in dhanka abaaraha gobolka sitti xooga lasaarayo dawaynta dadka oo dhamaan xarumaha caafimaadka iyo kooxaha wareega ee caafimaadku toos ushaqeeyaan, in biyaha lasii xoojiyo, in raashinka caawimada ah lakordhiyo kadibna calafka xoolaha laxoojiyo. Waxaa kale oo goluhu islaqaatay in dhismaha guryaha gobolka sitti oo ay kubaxayso maaliyad dhan 4milyan lafuliyo iyo waliba in dabagal adag lagu sameeyo hiragalinta qorshayaashii biyo xidheenada.
Ugudanbayna, wuxuu gurigu islaqaatay in todobaadkan gudihiisa lagu guuro xarunta cusub ee madaxtooyada.